ब्लगिंग पर्याप्त छैन, "फ्ल्यास प्रेस"! | Martech Zone
मंगलवार, मे 27, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो वाक्यांश हो जुन मँ - थकित हुँदै - राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारमा थकित हुँदैछु। म निश्चित छैन कि कसले मूल शब्द लेख्यो तर मैले यो मौसममा व्यापक प्रयोग भएको देखेको छु। हालसालै, वेस्ट भर्जिनियाका गभर्नरले यो शब्द प्रयोग गरी कि बाराक ओबामाले किन हिलारी क्लिन्टनको पहिरोमा पश्चिम वर्जिनिया गुमाए। उनले विपक्षी दृष्टिकोणलाई बचाउन खोजिरहेका छन् कि वेस्ट भर्जिनियामा अझै रेस मुद्दाहरू छन् र ओबामाले यो गुमाए कि उनले पर्याप्त समय खर्च गरेनन् प्रेस मांस, उर्फ ​​हात हल्लाउँदै।
यसले मार्केटर्सको लागि चासोको विषय हुनुपर्दछ कि यसले प्रभावको कत्तिको प्रभाव पार्छ प्रेस मांस वास्तवमा चुनावमा हुन्छ। अभियानहरू धेरै मेटाथमेटमाइन्समा रणनीतिक डेटाबेस मार्केटि campaigns अभियानहरू जस्तै छन्। सबै पक्षहरूले गणितिय प्रतिभा ल्याउँदछन्, समय र लक्षित मार्केटिंग बिभिन्न माध्यमहरू मार्फत तैनाथ गर्नुहोस्, र कडा मेहनत गर्नुहोस् मासु थिच्नुहोस्। राजनीतिको फोहोर बाहेक, यी रणनीतिहरूले काम गर्छन् भनेर बजारहरूले ध्यान दिनुपर्दछ।
हामीले के ओबामा अभियान बाट झुकाव राख्नु पर्छ
हामी धेरैले बिर्स्यौं कि हिलारीलाई एक बर्ष अघि २०० 2008 को राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारको रूपमा व्यवहार गरिएको थियो र बराक ओबामा डेमोक्र्याटिक पार्टीमा अनुभवहीन 'अप र कमर्स' को एक छोटो सूचीमा थिए। यथार्थमा उनका सटीक विपणन प्रयासहरू चुक्ता भए। ओबामा साइटमा एक नजर र तपाईं प्रत्येक लक्ष्य को लागी एक सन्देश पाउन सक्नुहुनेछ:
यहाँ इण्डियानापोलिसमा, मैले भाइरल ईमेल प्राप्त गरें जहाँ मैले कसैको तर्फबाट अभियानमा दान दिन सक्थे। ओबामा अभियान (subse पछि बन्द) सर्कलको दक्षिण १ ईन्डीमा दक्षिण अफिसमा कार्यालय खोलियो मासु थिच्नुहोस्। मैले ओबामा अभियानबाट केही प्रत्यक्ष मेल पनि पाएँ। घटनाहरूको हेराई र तपाईंले पाउनुहुनेछ कि ओबामा एक हात मिलाउने मेसिन हो, सकभर 16,000२० घटनाहरू यति टाढा र जान अझ एक टन।
म विश्वास गर्दिन कि ओबामाले पश्चिम वर्जीनिया गुमाए किनकि उनले पर्याप्त हात हिलाएनन्। म सहमत छु कि उहाँ केवल हराउनुभयो किनभने अप्पालाचियासँग सन्देश राम्रोसँग बसेन.
म राष्ट्रपतिको लागि बराक ओबामालाई प्रचार गर्दैछु, म केवल अविश्वसनीय मार्केटि machine मेशिनलाई पहिचान गर्दै छु जुन उनले राखेका थिए। उनको टोलीले गरिरहेको सबै कुरा सही छ - र यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूले कहिल्यै अवसरको लागि गुमाउँदछन् मासु थिच्दै.
फ्ल्यास प्रेस मेरो लागि काम गर्दैछ
मैले सोशल मिडियामा केही मध्यम सफलता प्राप्त गरेको छु, विशेष गरी यहाँ इन्डियानापोलिसमा। चाखलाग्दो कुरा, त्यहाँ धेरै छन् इन्डियानापोलिस ब्लगरहरू जसको छायाँ म मुश्किल इन्टर्नेट तथ्या .्कबाट खस्छु। एक क्षेत्रीय स्तरमा, यद्यपि, म विश्वास गर्दछु कि मसँग अधिक नामहरू छन् (र अनुहार) जुन मान्छेहरूले सम्झना गर्छन्।
म मेरो स्थानीय सफलताको owणी छु मासु थिच्दै। मेरो काम संग सानो इण्डियाना, इन्डी सांस्कृतिक ट्रेल, २०१२ को सुपरबोल समितिले र सोशल मीडियाको बारेमा स्थानीय व्यापारिक मानिसहरूलाई सिकाउने प्रत्येक अवसर लिने मेरो ब्लगको भन्दा बढी प्रभाव पार गरेको छ। यो मेरो गहन ब्लगमा राखिएको सबै समय दिईएको निगलउन गाह्रो गोली हो तर मान्छेहरूले यो महसुस गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि ब्लगिंग मात्र पर्याप्त छैन!
बाहिर निस्किनुहोस् र मासु थिच्नुहोस्! ब्ल्गिंगले पारदर्शिता र ईमानदारी प्रदान गर्दछ जुन मार्केटिंग ब्रोशर साइटले प्रदान गर्न सक्दैन - तर यसले अझै कसैलाई आँखामा हेर्ने र उनीहरूको हात मिलाउने अनुभव प्रदान गर्दैन।
यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि मसँग धेरै नै ठूलो ब्लग हुन्छ अधिक राष्ट्रिय एक्सपोजरको साथ यदि मैले यसलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा ल्याउन सक्षम भएँ। पूर्ण-समय कामको साथ त्यो सँधै गाह्रो हुन्छ, तर म अझै यो केहीलाई यस वर्षमा पार्ने आशा गर्दैछु।
टैग: 2008चुनावव्यक्तिगत - रुपमासभाहरूमाओबामाराजनीतिमासु थिच्नुहोस्बिक्री सक्षमता
के तपाइँ Noobs द्वारा चिन्तित हुनुहुन्छ?
मई 28, 2008 मा 8: 06 एएम
महान, सन्तुलित परिप्रेक्ष्य, डग। तपाईको ब्लगले यो गत हप्ता पढेको एउटा लेख मनमा आयो जसमा सेनेटर क्लिन्टनको अभियान प्रमुखहरू मध्ये एकले 100 अमेरिकी महिलाहरूबाट प्रत्येक $ 1,000,000 उठाउन प्रारम्भिक वकालत गरेको वर्णन गर्दछ।
कस्तो ब्लकबस्टर अपील! तर यो प्रस्ताव अर्का अभियान सल्लाहकारले खारेज गरे। (र हामीलाई थाहा छ कुन उम्मेद्वार सफलतापूर्वक माइक्रो-फन्डरेजिङ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ: ओबामा।)
"मासु थिच्नुहोस्" बनाम इन्टरनेट प्रविधिहरूमा: मलाई लाग्छ कि प्रत्येकले फरक लाभांश दिन्छ। केही ग्राहकहरू (वा मतदाताहरू) व्यक्तिगत पहुँचद्वारा मात्र छुनेछन्। अन्य तपाईसँग इन्टरनेटको उपस्थिति नभएसम्म तपाई कहिल्यै जडान हुनुहुन्न। अधिकतम नतिजा दुवै लिन्छ।
(वा, पुरानो साथीले भ्यानिला वा चकलेट आइसक्रिमको छनोट प्रस्ताव गर्दा भन्थे: "हो!")
मई 28, 2008 मा 5: 29 PM
डग: म पूर्ण रूपमा सहमत छु। मैले यहाँ एटलान्टा मा धेरै धेरै प्रशंसा हासिल गरेको छु एटलान्टा वेब उद्यमीहरू र अन्य सम्बन्धित भेटघाटहरू र घटनाहरू जुन म उपस्थित छु र समर्थन गर्छु जुन मैले कहिल्यै प्राप्त गर्न सकें मेरो ब्लग। साथै, किबोर्ड र कम्प्यूटर स्क्रिन पछाडि एक्लै बस्नु भन्दा आमनेसामने मानिसहरूसँग हुनु धेरै इनामदायी छ।
मई 29, 2008 मा 9: 30 PM
हो, हामी ट्रफल मिडियामा घटनाहरूमा उपस्थिति जारी राख्छौं (विश्व पोर्क एक्सपो अर्को हप्ता चासो राख्नेहरूका लागि हो :) साथै हामी आधारहरू छुने नियमित पुरानो फोन र इमेल प्रयोग गर्छौं।
हामी कृषिमा रुचि राख्नेहरूसँग सम्पर्कमा रहन नयाँ मिडिया च्यानलहरू पनि प्रयोग गर्छौं: Twitter (http://twitter.com/trufflemedia), the SwineCast.com (र गाईको मासु, दुग्ध, कुखुरा, र बालीका लागि यसको बहिनी साइटहरू) ब्लगहरू/पोडकास्टहरू, फ्लिकर (http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), र Blip.tv (http://trufflemedia.blip.tv/).
तर त्यहाँ मानिसहरूको रुचि के कुराहरू सुन्न, हातमा बियर लिएर कुराकानी गर्ने, र केही संवेदनशील विषयहरूमा न्युनन्स / शारीरिक भाषा हेर्ने (खानाको लागि मकै वा इन्धनको लागि मकै एक लोकप्रिय कुराकानी हो। आयोवा :)
फेरि धन्यवाद डग।
जुन 7, 2008 मा 11: 20 PM
हाम्रो ब्लग टुरमा देशभर १०,००० माइल यात्रा गरेपछि, म व्यक्तिगत F10,000F सामाजिक सञ्जालको शक्तिमा दृढ विश्वासी हुँ। एक हाँसो एक lol को तुलनामा अमूल्य छ।
जुन 11, 2008 मा 3: 53 PM
डग - राम्रो पोस्टिंग, मेरो मान्छे। मैले गर्न सक्ने कुनै पनि कुराको तुलनामा बिक्री, नेटवर्किङ र सम्बन्ध निर्माणमा धेरै प्रभावकारी हुने मैले राम्रो हात मिलाउने र मुस्कान पाउँछु।
भर्खरै मैले आफूलाई जागिर परिवर्तनमा फेला पारे, पूर्ण-समयको आधारमा व्यवसाय विकासमा प्रवेश गरेपछि मात्र मेरो दोस्रो। अन्तर्वार्तामा सबैले मलाई सोधे, "तपाईं नेतृत्व/व्यवसाय निर्माण गर्न के गर्नुहुन्छ?" निस्सन्देह, मेरो व्यक्तिगत नेटवर्क लीडहरूको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो किनकि मैले तिनीहरूबाट रेफरलहरू प्राप्त गर्दछु। यो मूल्य र पारस्परिक संचार ल्याएर मात्र गर्न सकिन्छ। म कसैलाई इमेल गर्दा "तपाईंको हात मिलाउनुहोस्" वाक्यांश धेरै प्रयोग गर्दछु। जस्तै, "म कुनै दिन तिम्रो हात मिलाउन तत्पर छु।" म ... "मासु थिच्ने" को प्रशंसक होइन। जस्तो लाग्छ... मासु।